ရခိုင်မှာ စစ်ဘေးဒုက္ခသည် ၁ သိန်း ၅ သောင်းခန့် ရှိလာ
ရခိုင်မှာ စစ်ဘေးဒုက္ခသည် ၁ သိန်း ၅ သောင်းခန့် ရှိလ...
18 มี.ค. 2563 - 22:42 น.
စစ်ဘေးရှောင် အများစု က အမျိုးသမီးနဲ့ ကလေးတွေဖြစ်ပါတယ်။
တိုက်ပွဲတွေအပြင်းအထန်ဖြစ်ပွားနေတဲ့ ရခိုင်ပြည်နယ်အတွင်းမှာ နေရပ်စွန့်ခွာထွက်ပြေးနေကြရတဲ့ စစ်ဘေးဒုက္ခသည် အရေအတွက်ဟာ ၂၀၂၀ ခုနှစ် မတ်လလယ်အထိ ၁၄၅၀၀၀ ကျော်ရှိလာနေပြီဖြစ်တယ်လို့ အချက်အလက်ကောက်ယူမှု တွေပြုလုပ်နေတဲ့ ရခိုင်တိုင်းရင်းသားမျိုးနွယ်များ အစည်းအရုံး REC ရဲ့အတွင်းရေးမှူး ဦးဇော်ဇော်ထွန်းက ဘီဘီစီကို ပြောပါတယ်။
ရခိုင်တိုက်ပွဲဟာ တပ်မတော်နဲ့ ရက္ခိုင့်တပ်တော် အေအေတို့အကြား ပြီးခဲ့တဲ့ ၂၀၁၈ ခုနှစ် ဒီဇင်ဘာလကနေစတင်ဖြစ်ပွား ခဲ့ကြတာဖြစ်ပြီး ချင်းပြည်နယ် ပလက်ဝမြို့နယ်အပါအဝင် ၂၀၁၉ ခုနှစ်အကုန်မှာ ရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းကနေ အလယ်ပိုင်းဒေသအထိ တိုက်ပွဲတွေက ကျယ်ပြန့်ခဲ့ပါတယ်။
၂၀၁၉ ခုနှစ်အတွင်းမှာ ဘူးသီးတောင်၊ ရသေ့တောင်၊ ပုဏ္ဏားကျွန်း၊ ကျောက်တော်၊ မြောက်ဦး၊ မင်းပြား၊ မြေပုံ၊ အမ်း၊ ပေါက်တော၊ ပလက်ဝစတဲ့မြို့နယ်တွေအတွင်းမှာ စစ်ဘေးရှောင်ဦးရေ ၁ သိန်းကျော်သာရှိခဲ့ပေမယ့် အခု ၂၀၂၀ ခုနှစ် သုံးလတာကာလအတွင်းမှာ ပိုမိုမြင့်တက်လာခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့ REC ကပြောပါတယ်။
အခုလိုမျိုး နေရပ်စွန့်ခွာထွက်ပြေးလာခဲ့ကြသူတွေ ရုတ်တရက်မြင့်တက်လာခဲ့ရတာဟာ တိုက်ပွဲတွေအတွင်း တပ်မတော်က ကျေးရွာတွေကို လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှု၊ လက်နက်ကြီးတွေနဲ့ပစ်ခတ်မှုတွေကို ပြင်းပြင်းထန်ထန်ပြုလုပ်လာနေတဲ့အတွက် ဒေသခံကျေးရွာသားတွေဟာ မိမိတို့ရဲ့ကျေးရွာတွေမှာ ဆက်လက်မနေထိုင်တော့တဲ့အတွက် ထွက်ပြေးလာခဲ့ကြတာ ဖြစ်ပါတယ်။
အခုလအတွင်း ကျောက်တော်မြို့နယ်မှာ ၄ ထောင်နီးပါးထိတိုးလာ
"လောလောဆယ်ကတော့ နောက်ဆုံးအခြေအနေကို စာရင်းကောက်ယူနေဆဲဖြစ်ပါတယ်။ အခုရရှိထားတဲ့စာရင်းတွေအရတော့ ၁၄၅၀၀၀ နီးပါးရှိလာပါတယ်။ ဖေဖော်ဝါရီနောက်ဆုံးအပတ်နဲ့ မတ်လအတွင်းမှာ နှစ်ဖက်တိုက်ပွဲတွေဖြစ်နေကြတဲ့ ဧရိယာသုံးခုပေါ့နော်။ ရသေ့တောင်ဘူးသီးတောင်အစပ်က မေယုမြစ်အရှေ့ဘက်ကမ်း၊ ပလက်ဝနဲ့ကျောက်တော်အကြားမှာရှိတဲ့ ကုလားတန်မြစ်ကြောင်းကနေရာတွေရယ်။ နောက်တစ်ခါကျတော့ မြေပုံနဲ့မင်းပြားအစပ် အဲ့ဒီနေရာသုံးခုကို တပ်မတော်က ရေတပ်ကရော၊ လေကြောင်းကရော ကျေးရွာတွေရှိတဲ့နေရာကို ပစ်ခတ်နေတာတွေ့ရပါတယ်။ ဒီအကျိုးဆက်တွေကြောင့် သူတို့ဟာ အရင်ကလိုခဏတဖြုတ်မဟုတ်ဘဲ မူလနေရပ်က ဝေးလံတဲ့နေရာတွေကို သူတို့လုံခြုံရေးအတွက် ထွက်ပြေးလာခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။"လို့ ဦးဇော်ဇော်ထွန်းက ပြောပါတယ်။
ဒါ့အပြင် ကျောက်တော်မြို့နယ်နဲ့ ပလက်ဝမြို့နယ်အကြား ကုလားတန်မြစ်ကြောင်းအတွင်းမှာလည်း တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားနေတဲ့နေရာတွေနဲ့ အနီးဝန်းကျင်မှာရှိတဲ့ ကျေးရွာတွေကို လက်နက်ကြီးပစ်ခတ်တာတွေ၊ လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေကြောင့် ဗုံးသီးတွေကျရောက်ပြီး ကျေးရွာတွေမီးလောင်ကာ ထိခိုက်သေဆုံးမှုတွေ ဖြစ်ပွားနေပါတယ်။
ကုလားတန်မြစ်ကြောင်းအတွင်းမှာ တိုက်ပွဲတွေအဓိကဖြစ်ပွားနေတဲ့နေရာတွေဟာ မီးဝကျေးရွာအနီးမှာရှိတဲ့ တပ်မတော်ဗျူဟာကုန်း လက်နက်ကြီးစခန်းနဲ့ အနည်းဆုံးနေရာသုံးခုလောက်မှာ ဖြစ်ပွားနေကြတာ ရက်ပေါင်း ၄၀ နီးပါးအထိရှိလာနေပြီဖြစ်ပြီး ဗုံးကြဲတိုက်ခိုက်မှုတွေကြောင့် မီးလောင်ပျက်စီးသွားတဲ့ ကျေးရွာ ၇ ခန်ထိရှိကာ ကျေးရွာသား ၄၀၀၀ နီးပါးလောက်ဟာ ကျောက်တော်မြို့ပေါ်ကို ထွက်ပြေးရောက်ရှိနေကြတယ်လို့ ကျောက်တော်မြို့ခံတစ်ဦးက ပြောပါတယ်။
ဖေဖော်ဝါရီလကုန်ပိုင်းနဲ့ မတ်လလယ်အထိ တိုက်ပွဲတွေအတွင်း ကျောက်တော်မြို့နယ်မှာ ပြိုင်းတိုင်း၊ မုန့်သန်းပြင်၊ ပွီဟုန်း၊ ကျောက်တန်း၊ ကျော်ရွှီပြင်၊ ပလက်ဝမြို့နယ်မှာ လိပ်ခေါင်း၊ မီးစာဝနဲ့ ဝက်မ စတဲ့ကျေးရွာ ၈ ရွာခန့်ဟာ မီးလောင်မှုဖြစ်ပွားခဲ့ပြီး ကျေးရွာသားတွေနေရပ်စွန့်ခွာမှုများပြားခဲ့ပါတယ်။
ဒီဖြစ်စဉ်နဲ့ပတ်သက်လို့ တပ်မတော်ဘက်ကို ဘီဘီစီက ဆက်သွယ်မေးမြန်းဖို့ကြိုးစားခဲ့ပေမယ့် အဆက်အသွယ်မ ရရှိခဲ့ပါဘူး။
ကျောက်တော်မြို့ပေါ်ကို လူဦးရေ ၄၀၀၀ ကျော်လောက်ထွက်ပြေးခိုလှုံလာခဲ့ကြတဲ့အတွက် အဲ့ဒီလူတွေနေရေးထိုင်နေရေး၊ စားရေးသောက်ရေးအတွက် တော်တော်လေးကို အခက်အခဲရှိနေပြီး အကူအညီထောက်ပံ့ပေးဖို့လိုအပ်နေတယ်လို့ ဒုက္ခသည်အရေးဆောင်ရွက်နေတဲ့ ကျောက်တော်မြို့ခံတစ်ဦးက ပြောပါတယ်။
အခုလိုမျိုး တိုက်ပွဲတွေအပြင်းအထန်ဖြစ်ပွားခဲ့ကြတဲ့အတွက် ဖေဖော်ဝါရီလအတွင်းမှာ ရခိုင်ပြည်နယ်အတွင်း ထိခိုက်သေဆုံးခဲ့ရသူအရေအတွက်ဟာ ၄၀ ကျော်ရှိခဲ့ပြီး ဒဏ်ရာရရှိသူအရေအတွက်ဟာ ၁၂၀ လောက်ထိမြင့်တက်ခဲ့ တယ်လို့ REC ရဲ့စာရင်း အရ သိရပါတယ်
อัลบั้มภาพ ရခိုင်မှာ စစ်ဘေးဒုက္ခသည် ၁ သိန်း ၅ သောင်းခန့် ရှိလာ